ငါးဂိမ်းလောင်းကစားသမုဒ္ဒရာဘုရင်က3Plus အား Buffalo မိုးကြိုး - အမြတ်အစွန်းငါးအားကစားပြိုင်ပွဲ. ဂိမ်းဆော့ဝဲလ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါ. အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဗီရို.
နေအိမ် » ထုတ်ကုန် » ငါးဂိမ်းလောင်းကစားသမုဒ္ဒရာဘုရင်က3Plus အား Buffalo မိုးကြိုး
အမြတ်အစွန်းငါးငါးမျိုးကိုကိုင်တွယ်ခြင်းဖြင့်လောင်းကစားခြင်း ၅% မှ ၅၀%
Fish Game လောင်းကစား Ocean King ကစားနည်း3Plus အား Buffalo မိုးကြိုး
In ငါးဂိမ်းလောင်းကစား Ocean King3Plus အား Buffalo မိုးကြိုး ဖမ်းမိဖို့ကွဲပြားခြားနားသောငါးရှိပါတယ်, ကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်တန်ဖိုးများကိုတန်ဖိုးရှိနေသောအားလုံးသော. ကစားသမားများသည်ကစားပွဲများအတွင်းဖမ်းမိသောငါးအရေအတွက်နှင့်တန်ဖိုးအားဖြင့်သူတို့၏အမှတ်ရမှတ်များကိုတိုးပွားစေသည်.
အဓိက Ocean King Plus: Buffalo Thunder ဂိမ်းကစားခြင်းသည်အင်္ဂါရပ်များ၊. ၎င်းတို့သည်ကစားသမားများကိုရမှတ်များပိုမိုရရှိရန်နှင့်အလှည့်ကျရရှိရန်ပိုမိုမြင့်မားသောအခွင့်အလမ်းပေးသောကြောင့်၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုရန်အရေးကြီးသည်, ပိုပြီးအနိုင်ရရှိဝင်ငွေအလားအလာ.
အင်္ဂါရပ်များ ငါးဂိမ်းလောင်းကစား Ocean King3Phoenix ၏ Legend Plus ပါဝင်သည်:
1. ကျွဲ – သူဌေး
အဆိုပါ Buffalo အောင်မြင်စွာထိမှန်သောအခါ, ၎င်းကိုဖမ်းရန်ကွင်းဆက်ကိုစွန့်ပစ်ပြီး Struggle Mode သို့ ၀ င်ရောက်လိမ့်မည်. ရုန်းကန်နေစဉ်အတွင်း, Buffalo ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပြတ်တောက်မှုတိုင်းဟာပိုများလာတယ်. Buffalo ကိုဖမ်းမိလျှင် ပို၍ ဒေါသကြီးသောတိုက်ခိုက်မှုစတင်ပြီးကစားသမားသည်ပိုမိုမြင့်မားသောဆုကိုရရှိလိမ့်မည်.
2. ဖီးနစ် – သူဌေး
ကစားသမားတစ် ဦး ဖမ်းမိသောအခါ Phoenix ၏မြောက်မြားစွာသည်စခရင်ပေါ်ရှိအရာအားလုံးကိုဖမ်းရန်ဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မည်.
အဆိုပါ Mermaid ကိုဖမ်းမိပင်လယ်ငါး၌ရှိသမျှကိုတိုက်ခိုက်ရန် Mermaids ၏လှိုင်းရှစ်ဆင့်ဆင့်ခေါ်နိုင်ပါတယ်.
4. Smash Hammer ဂဏန်း
Smash Hammer Crab သည် Catching Hammer Crab သည်လျှပ်စီးကို ချ၍ မျက်နှာပြင်ကို ဖြတ်၍ ပတ်ပတ်လည်ပျံသန်းနေသောဇာတ်ကောင်များကိုသတ်ပစ်သည်.
သင်တစ် ဦး လေဆာရောင်ခြည်ကိုအသုံးပြု။ တ ဦး တည်းရိုက်ချက်ကန့်သတ်အချိန်ရလိမ့်မယ်.
7. Drill ဂဏန်း Breaking
တစ် ဦး Breaking လေ့ကျင့်ခန်းကဏန်းဖမ်းမိသောအခါကစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းကိုမီးရှို့, theရိယာကိုထိုးဖောက်ခြင်းနှင့်ငါးဖမ်းရန်အခွင့်အလမ်းရှိနိုင်ပါသည်.
Golden Roulette သည်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်. သင် roulette ရပ်တန့်ဖို့ SHOOT ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ.
ငါးဂိမ်းလောင်းကစားသမုဒ္ဒရာဘုရင်က3Plus Legend of the Phoenix သည်ကစားသမားများအကြား ၄ င်း၏အဆုံးမဲ့စွမ်းအားကြောင့်နာရီများအတွင်းအပြိုင်အဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်လိမ့်မည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်, မယုံနိုင်လောက်အောင်ထူးခြားတဲ့ဇာတ်ကောင်, နှင့်အဖျက်လက်နက်များ. Mermaid နှင့် Mystic Dragon Power မှသည်မီးသတ်မုန်တိုင်းများအထိဖြစ်သည်, ကစားသမားများကဒီဂိမ်းထဲမှာဝှက်ထားသောဆုလာဘ်ကိုချစ်လိမ့်မယ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်များနှင့်လက်နက်များအချို့ပါဝင်သည်:
Blazing Phoenix: ပိုင်ရှင်ကစားသမားအားရက်ရက်ရောရောအပိုဆုများပေးအပ်ရန်မျက်နှာပြင်ကိုလှည့်နေသည်
လေဆာရောင်ခြည်: ကျယ်ပြန့်ရိုက်, ၎င်း၏လမ်းကြောင်းရှိမည်သည့်ငါးကိုဖျက်ဆီးဖို့မျက်နှာပြင်ကိုဖြတ်ပြီးအစွမ်းထက်လေဆာ
Smash Hammer: မျက်နှာပြင်ရှိမည်သည့်အက္ခရာများနှင့်မည်သည့်အက္ခရာများကိုမဆိုရှင်းလင်းနိုင်သည့်စွမ်းအားကောင်းသောပေါက်ကွဲမှုဖြစ်သည်